Buenos Aires in english: Zezipho ukuthi uMongameli wathatha uPapa Argentina Francisco
Zezipho ukuthi uMongameli wathatha uPapa Argentina Francisco
UCristina Kirchner and Francis Pope kwadingeka kwasemini ngesikhathi sokuhlala laseSanta Marta, e-Vatican, ngaphansi umhlangano wesine phakathi ezimbili eyaqala emva ukushintshana izipho kanye ngezandla ezifudumele kuMongameli kanye ukudluliselwa Argentina.
UMongameli wanikeza yerosari Francisco yethusi nickel yesiliva nge amasu licijile, lishona futhi oqoshiwe owenziwa i abakhandi Michelangelo Zeitcher Termas de Río Hondo.
Waphinde wanikeza Dome isigamu (ebaziwe sound) Virgin Desatanudos by Fernando Pugliese kanye nesithome Evita emafutheni artist Jorge Esteban Calvo.
Phakathi izinto seliqokomisa nesithome pop Yobungcwele laKhe ngomculi uRoberto Devorik, ibhokisi uju ovela wokubambisana abakhiqizi Chaco "Argenmiel" futhi isithombe iNcasakazi of Lujan ehlotshiswe nge porteño filleting Carassai esenziwe Victoria.
Ngemuva kokudla kwasemini kwaba ithuba of comitivia ezihambisana Cristina khulula izipho zabo. Womabili baholi wahlangana nabaholi bezombusazwe of elalivela zase, ngamunye ngamunye, enikeza izipho balethwa esimweni saba sikhathi babanjwa futhi Cristina laughingly sifaniswa 'omunye SMME Argentina. "
Ngakunye ngendlela yakhe siqu, unomgomo ezivamile ukuletha kuwe Francisco kakhudlwana kancane of lakubo, abaholi bezombusazwe ababeyingxenye ingxenye ithimba ukuba kuhambisane Argentina UCristina, wakwazi arrimarle ummeleli uPapa izipho izinkanuko Argentina.
Kanjalo, indawo kwezombusazwe wayekhona ngesikhathi tinongo eBuenos Aires iziMeya Juan Patricio Mussi (Berazategui) kanye Fernando Espinoza (ukubulawa), i njalo umengameli yokugcina yesifundazwe PJ.
Espinoza kwaholela Francisco pennant Party Massacre, zazo ayilo imeya, futhi neBhayibheli nesiLatini lid futhi emuva, eqoshwe zesiliva ngumuntu abakhandi wendawo, base lanemidvwebo imbali ka St Francis of Assisi no Lady Wethu Milagros ngokulandelana.
Mussi kanti njengoba iMeya of Berazategui, inhloko-dolobha ingilazi kazwelonke, wanika upapa a rosettes esikhwameni ukuthi wabheka efanayo on lapel wakhe wonke base-Argentina, ekhiqizwa a wokubambisana walowo yakithi.
Ngokuvumelana isidlaliso sakhe futhi uthando lwakhe kanobhutshuzwayo, Andrés "Cuervo" Larroque wanika upapa idiploma iKhomishana Sub of San Lorenzo Fan bagqugquzela ukubuya the club ukuze boedo, bona lapho phakamisa ukwakha inkundla, "uPapa Francis."
Larroque wabuye wanikeza T amabutho 21,24 Villa gumbi, isithombe uyise Mugica kanye anezinhlaka umagazini cover zonyaka La Cancha 46 kuboniswe ukuthi front amagoli kanye Cyclone minyaka.
Yena, yilungu lephalamende Joseph Ottavis wesifundazwe wabala cuardenillos on ngemisebenzi kanye workshops kugqugquzelwa ngu Ministry of iHlelo eBuenos Aires Peronist Youth futhi waqinisekisa ukuthi lo nyaka izinkulungwane Peronists abasha izohlangana udwendwe ukubuza Lujan ukuthula impilo uFrancisco.
Mercedino mthetho, Wado uPetru kugcwaliseke lokho athi isithembiso ayesenze sesifunda wakho umpristi wendawo, uBaba uBruno, kanti uPapa wamnika ezintathu salami babevamile Mercedes.
Khonamanjalo, uLeonardo Grosso wathatha ithuba lokunikeza umfutho emsebenzini wakhe njengomuntu uhlobo nodlame olubhekiswe kwetikhungo futhi adluliselwa uchungechunge izincwadi ezizimele eyabhalwa uMabel Wittis, Rosa Miriam IBrú no Medina, phakathi kwabanye, bonke omama lezinsizwa Kubulawe amaqiniso ngalo amaphoyisa angenela.
Okulandelayo, kanye iminyaka engu-30 lo isethulo aphethwe Ernesto Sabato yombiko on ukunyamalala abantu ngesikhathi kobushiqela, okwakuyoholela akhale encwadini Never Again, umholi Radical Leandro Santoro sehlulwe Francisco 2 amakhophi umbhalo futhi memoir uRaúl Alfonsín.
Ngaphambilini, namabutho Campora wamletha izincwadi ezintathu eyanyatheliswa eminyakeni yamuva mayelana ukuvela qembu. Wamangaza abanye lapha ukuthi omunye imibhalo wayengowokuqala Intatheli owabhala ithoni esibucayi kakhulu mayelana group, futhi omunye namabutho uthe bafuna "upapa nabo bayakubona slurs zansuku 'ngokumelene group.
Zezipho ukuthi uMongameli wathatha uPapa Argentina...
The Argentine government will pay 7% annual intere...
The Argentine Foreign Minister Hector Timerman thr...
Ellen degeneres dancing Anaconda Video!
Amazing: Emma Watson topless !!!
Stop dude, It wasnt me! I swear!